Boorsooyinka Shiinaha ee loo yaqaan 'Customized boorsooyinka soo-saareyaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Boorsada isboortiga > Boorsooyinka boorsada
1. Hordhaca Boorsada Basel:
(1) Qaybta weyn ee weyn waxay ku habboon tahay koofiyadaha, galoofyada iyo qalabka.
(2) Gacanta fiidmeerta foostada ah ee la isku qurxiyo waxay haysaa ilaa 2 fiidmeerta.
(3) Dunta dhogorta ah jeebka taleefanka gacanta.
(4) Qaybta kabaha ee hawada la galiyay.
(5) Guddi qurxin oo laga saari karo (oo ku habboon 12 inji hoop).
(6) Joogto J-qaab eg oo waara.
(7) Xarunta lagu daweeyay substrate-ka biyuhu.
(8) Suumanka garbaha oo duuban iyo wareegga dhabarka.
(9) Cabirka ugu fiican ee loogu talagalay ciyaartoydu dhammaan heerarka laga soo bilaabo horyaallada dhallinyarada illaa orodka dadka waaweyn.
(10) Polyester-ka biyaha u adkaysta Oxford.
(11) U diyaari dhammaan qalabka hal meel, diyaarna u ah in la ciyaaro. Laga soo bilaabo dhallinyar ilaa qof weyn, oo sifiican loo qaabeeyey si loogu habeeyo dhamaan qalabka baseball-ka, boorso kasta waxay haysaa ilaa afar fiidmeerta ama dhalooyinka biyaha, koofiyad baseball ah, galoofyo jilicsan, jajabyo, koofiyado baseball iyo galoofyo qabanaya. Ha u fadhiyin boorso aan xitaa ku habboonayn koofiyaddaada baseball.
(12) Kaydinta koofiyadda bannaanka-Naqshaddan gaarka ahi waxay u oggolaaneysaa koofiyaddaada baseball-ka in lagu keydiyo banaanka bacda, sidaasna looga sii daayo gudaha si loo keydiyo qalab badan oo baseball ah.
(13) Neefsasho iyo raaxo, fudud oo la qaado iyo hawo si looga hortago urta-boorso isboorti kasta oo la hagaajin karo waxaa lagu qalabeeyaa suumanka garabka suufka iyo aaladda ilaalinta dhexda, iyo sidoo kale aaladda hawo-qaadashada ee ku jirta, waxay ku siin kartaa dareen qabow oo raaxo leh.
(14) Doonista ku habboon - Shandadaha ayaa sidoo kale leh jillaab xayndaab isku dhafan oo loogu talagalay qalabka leakproof, qaybta kabaha ee hawo leh, aaladda gacmo gashiga Velcro ee bannaanka iyo jeebadaha dibadda ee furayaasha, taleefannada, boorsooyinka, iwm.
(15) cimri dherer waara-Bacdayada fiidmeerta kubbadda baseball-ka waxay ka samaysan tahay cufnaan sare 600 denier Oxford fiber iyo fiber polyester, oo u adkeysan kara tababbarka, ciyaaraha iyo cayaaraha habeenkii.
2. Boorsada baseball product parameters (specifications)
Boorsada boorsada baseball ee garabka bidix oo taagan
Dhererka 50cmX Width 36cmX Dhererka 23cm
3. Sidee loo doortaa boorsada baseball-ka ugu fiican?
Are you a baseball player? The player must have a baseball backpack. This is because; the best baseball backpack provides convenience for the player; to move his equipment from one point to another in the stadium. As a sport, baseball comes with a lot of equipment, which requires a sturdy bag to store everything. Boorsada baseballs usually have compartments, and equipment can be stored in each compartment. This means that the bag has compartments for each device, such as compartments for bats, cleats, shoes and gloves.
(1) Boorsooyinka baseball waxaa lagu heli karaa qaabab kala duwan, dhar iyo midabbo. Waxaad dooran kartaa boorsooyinka safarka ee kala duwan si aad u haysato qalabkaaga isboorti. Boorsada baseball ee aad dooratay waxay kuxirantahay baahiyahaaga. Sidaan horay u soo sheegnay, badankood boorsooyinka baseball-ku waxay ka kooban yihiin qaybo kala duwan. Qiimahoodu wuxuu kuxiranyahay cabirkooda iyo tayadooda. Helitaanka boorsada baseball ee ku habboon ma aha hawl fudud. Si kastaba ha noqotee, waa inaad hubisaa in shandadaha la soo iibsaday ay ka soo baxayaan awoodaada dhaqaale iyo shuruudahaaga.
(2) Ogow tirada qalabka aad haysato; maxaa yeelay tani waxay ku tusi doontaa cabirka boorsada aad u baahan tahay si aad dhammaan waxyaabaha ugu rido boorsada baseball-ka. Weligaa ha iibsan boorsada ugu weyn ee baseball. Laakiin boorsada baseball ee aan qaadi karin oo keliya qalabka, laakiin sidoo kale boorso qaadi kara boorsadeeda. Waxaad dooran kartaa boorso leh garabka garabka maxaa yeelay waxaad si fudud u sudhan kartaa garabkaaga intaad safreyso.
(3) Hubso in boorsadaada kubbadda baseball-ka ay biyuhu ka madhan yihiin. Tani waxay hubin doontaa inaan qoyaanku gelin gudaha bacda; maxaa yeelay bacda waxaa ku jira qalab qoyaan u nugul, sida ulaha alwaaxa iyo galoofyada, haddii ay la xiriiraan qoyaan, waxay saameyn ku yeelanayaan waxqabadkooda maalintii. Maaddada la isticmaalay waxay noqon kartaa maqaar, caag ama maro.
(4) Hubi waxyaabaha ku jira boorsada baseball-ka (haddii ay ka samaysan tahay waxyaabo dhumuc weyn oo adkeysi leh).
(5) Boorsada kubbadda baseball ee aad dooratay waa inay lahaataa suuf gudaha ah si looga ilaaliyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah waxyeellada ay sababaan dhibcaha shilalka ah.
(6) Bacda baseball-ku waa inay ahaataa mid jilicsan. Boorsada baseball-ka waxay leedahay giraangiraha la dhaqaajin karo ama suumanka. Xargaha ama giraangiraha ayaa u fududeynaya ciyaartoydu inay qaadaan bacda.
5. Xirxirida iyo rarka boorsooyinka baseball-ka
(2) Cabirka hal xirmo ee caadiga ah: dhererka 50cmX width 36cmX height 23cm, waxaan u habeyn karnaa cabirka baakada naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka.
Calaamadaha kulul: Boorsooyinka kubbadda cagta, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, la habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka ku jirta